बिमान दुर्घटनामा मृतकका आफन्तहरुप्रति समवेदना, घाइतेहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना
काठमाडौंमा भएको युए बांग्ला बिमान दुर्घटनामा कम्तीमा ४९ जनाको ज्यान जानुका साथै २२ जना घाइते घाइते भएपछि मृतकका आफन्तहरुप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ ।
के भन्छन् बिमान दुघर्टनामा बाँचेका यी नेपाली ? (भिडियो)
सोमबार काठमाडौंमा भएको विमान दुर्घटनामा केही भाग्यशाली यात्रुहरुभने बाँच्न सफल भएका छन् । कम्तीमा ४९ जनाको ज्यान जानेगरी भएको दुर्घटनामा यी यात्रु कसरी बाँचे? उनी के भन्छन् ? हेर्नुहोस् भिडियो